Zvinyorwa zvePavel Obod pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Pavel Obod
Pavel Obod muzvinabhizimusi, muvambi we Vadivelu Comedy Sloboda Studio, uye muzvinashawo wezvivakwa. Anoda kubatana nevamabhizimusi uye atanga makirabhu mazhinji emabhizimusi eECOs, kutengesa, uye maneja weprojekiti muUkraine neBelarus.
MarTech Maitiro Ari Kutyaira Digital Shanduko
NeChishanu, Gumiguru 22, 2021 NeChishanu, Gumiguru 22, 2021 Pavel Obod
Nyanzvi dzakawanda dzekushambadzira dzinoziva: mumakore gumi apfuura, matekinoroji ekushambadzira (Martech) akaputika mukukura. Kukura uku hakusi kuzodzikira. Muchokwadi, iyo yazvino 2020 ongororo inoratidza kune anopfuura zviuru zvisere zvekushambadzira tekinoroji zvishandiso pamusika. Vatengesi vazhinji vanoshandisa maturusi anopfuura mashanu pazuva rakapihwa, uye anopfuura makumi maviri ezere mukuita kwemaitiro avo ekushambadzira. Martech mapuratifomu anobatsira bhizinesi rako kudzoreredza mari uye rubatsiro